နိုင်ငံတော်အသိအမှတ်ပြုစာရင်းတွင် ပသီလူမျိုးမပါရှိ၊ပသီအမျိုးသားကွန် ဂရက်ပါတီအမည်အသစ်ပြန်လည် ရွေးချယ်ရန် လိုအပ် | Lumyo Chit
နိုင်ငံတော်အသိအမှတ်ပြုစာရင်းတွင် ပသီလူမျိုးမပါရှိ၊ပသီအမျိုးသားကွန် ဂရက်ပါတီအမည်အသစ်ပြန်လည် ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်
ပြည်တွင်းသတင်း — မန္တလေး၊ မေ ၁၄၊ ၂ဝ၁၂
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပသီအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီအား ပါတီ၏အမည်နှင့်ပတ်သက်၍ အသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်တင်ပြရန်၊ ချမ်းအေး သာစံ မြို့နယ်နေ ပါတီကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးထံ မေလ ၁ဝ ရက်၊ ရက်စွဲဖြင့် အကြောင်းကြားစာ ပို့လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ပသီအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ၏ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော် ဝါရီ ၁၃ ရက်စွဲပါ နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက် အဆိုပါ ပါတီအား အမည်သစ် ပြောင်းလဲလျှောက်ထားပါရန် အကြောင်းကြားစာ ပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပသီအမျိုးသားကွန်ဂရက် ပါတီမှ ဦးမြင့်ဝေအပါအဝင် ၂၁ ဦးဖြင့် ပါတီတည်ထောင်လိုကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်မှ အကြောင်းပြန်ရာတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာန၏ ပြန်ကြားချက် များ အရ ယခင်ပြုစုခဲ့သော လူမျိုး ၁၃၅မျိုး စာရင်း၌ လည်းကောင်း၊ ယခု နောက်ဆုံးပြုစုထားသည့် လူမျိုး ၁ဝ၁ မျိုးစာရင်း၌လည်းကောင်း၊ ပသီအမျိုးသား(ပသီလူမျိုး)ဆိုသည်မှာ မရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော လူမျိုးစာရင်းတွင် ““ပသီလူမျိုး”” ပါဝင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ပသီအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီအမည်သည် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဥပဒေပုဒ်မ ၈(က)အရလည်းကောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(က)အရ လည်းကောင်း၊ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် သွယ်ဝိုက်ငြိစွန်းသည့်သဘော သက်ရောက်နေသည့်အတွက် ပါတီ၏ အမည်သစ်ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်၍ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဟု အကြောင်းပြန် ထားသည်။
နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(က) အရ ““ပါတီ၏ အမည်၊ အလံနှင့် တံဆိပ်တို့ကို တင်ပြရာတွင် ဘာသာ သာသနာနှင့် ယှက်နွယ်သော သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်း လုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ထိခိုက်စေသော အမည်၊ အမှတ်အသား သို့မဟုတ် သင်္ကေတ တို့ကို ရှောင်ရှားရမည်ဟူသော ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် သွယ်ဝိုက်ငြိစွန်းသည်ဟု အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ပယ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင်၏ အကြောင်းကြားစာအရ သိရှိရသည်။
ပသီအသိုက်အဝန်းကပြောရာတွင် ရှေးမြန်မာဘုရင်များလက်ထက်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား ပသီ၊ မဟာမေဒင် စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ မှန်နန်းရာဇဝင်၊ ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇဝင်နှင့် ဦးကုလားရာဇ ဝင် တုိ့တွင် အတိအလင်းဖော်ပြခဲ့ကြောင်း၊ ၁၈၈၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ၁၉၂ဝ၊ ၁၉၃ဝ ခုနှစ်များတွင်လည်း ပသီဟူသော အခေါ်အဝေါ်များရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့ကဆိုသည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပသီအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမောင်မောင်လှမြင့်က ပြောရာတွင် ““ကျနော်တို့ ပသီလူမျိုးဆိုတာ မြန်မာ့မြေမှာ ဟိုးအရင်ကတည်း က ရှိနေခဲ့တာပါ။ မှန်နန်းရာဇဝင် ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇဝင် ဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ(၁၇၈၊ ၁၈၂၊ ၅၁၄)နဲ့ ဦးကုလားရာဇဝင် ပထမတွဲ၊ ဒုတိယတွဲ နှစ်တွဲစလုံးမှာ အထင်အရှားရှိပါတယ်။ မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တာပါ””ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းကပြောရာ တွင် ““ကျနော်တို့အနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးကိုလည်း မဖြိုခွဲပါဘူး၊ ကြံကြီးစည်ရာဗျာ၊ စိတ်တောင်မကူးဝံ့ပါဘူး၊ လူကြီးတွေကတော့ အမည်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ် သက်ပြီး၊ အစည်းအဝေးလုပ် နေတယ်၊ ပြောင်းပေးဆိုတော့ လည်း ပြောင်းပေး ရုံပဲပေါ့၊ ပြောင်း မယ်နဲ့တူပါတယ်””ဟု ဖြည့်စွက် ပြောသည်။
ပသီအမျိုးသားကွန်ဂရက် ပါတီအနေဖြင့် အမည်သစ်ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်၍ မေလ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ တရားဝင်ပြန်လည်တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပါက ပါတီတည်ထောင် ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းကို ငြင်းပယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အကြောင်းကြားစာအရ သိရှိရပါ သည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် အမိန့်ကြေညာ စာအမှတ်(၁/၂ဝ၁ဝ)ဖြင့် နိုင် ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၂၆ အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ နည်း ဥပဒေများထုတ်ပြန် ကြေညာထားကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီတည်ထောင်လိုသူများအား ဥပဒေပုဒ်မ ၄ နှင့် ပုဒ်မ ၆ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ၊ မရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ နှင့် စိစစ်ညှိနှိုင်း ကာ ဆောင်ရွက် ပေးနေကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
This entry was posted in Panthay and tagged Pathi. Bookmark the permalink.
← ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ တိုင်းရင်းသားအစ္စလာမ်သာသနာဝင်များ
ဘယ်က၊ ဘာကြောင့်၊ ဘယ်လိုနှင့် ဘယ်သို့ (From Where, Why, How and To Where) →